Ikhaya / Ikhishi Faucets / Embizeni Filler Ikhishi ompompi / WOWOW Commercial Ikhishi Embizeni Filler Pasta Ingalo Chrome
WOWOW Commercial Ikhishi Pot Filler Pasta Ingalo Chrome
IKHWALITHI EPHEZULU: odongeni ufaka isimpompi sengalo ende, UKUMINA OKUPHEZULU IBRASS PURE/ITHUSI eyenziwe (2.885 lb), hhayi njengabanye ompompi abashibhile, ukusebenzisa isikhathi eside kuqinisekiswa ikhwalithi yomsebenzi osindayo,
UBUHLUNGU BANGAPHAKATHI ABAPHOLISHIWE, wonke amaconsi adlula endaweni yokugcwalisa ibhodwe kungokwemvelo futhi kunempilo, akukho mpahla eyingozi; isiphetho esihle se-chrome, esiqinile, esingenamthofu, simelana nokugqwala
IMFULUKAZI OSONQAYO OSONDELAYO: Amavalvu angu-2 okulawula ukugeleza okuphindwe kabili, i-spout ehlangene kabili inweba ifike ku-20″, umpompi wensimbi engagqwali uyagoqa usuke endleleni uma ungasetshenziswa. Ngokugcwalisa ibhodwe, ukupheka kulula. Ukufakwa kokukhweza odongeni okuhlukile kuvumela isikhala esengeziwe kukhawunta kuyilapho kunikeza nokufinyelela okukhethekile.
IZINGA ELIKHULU LOKUSHIYA KWAMANZI: Umpompi ogoqa izibambo ezingu-2 une-neoperl aerator enikeza ingcindezi engaguquki, ukugeleza kwamanzi okungaguquki okuqondile. I-aerator ye-ABS yonga u-50% wamanzi kanye ne-anti-splatter, i-ceramic cartridge engaconsi.
UKUFAKA OKULULA NGESIXHUMI: usayizi womucu wempompi yasekhishini yamahhala engu-1/2” NPS, futhi ifakwe 1/2” NPS ukuya ku-1/2” NPT isixhumi, UKUSEBENZISA AMANZI ABADALA KUPHELA.
Iwaranti, UKUSEKELWA KWAMAKHASIMENDE: Iwaranti yeminyaka emi-5 nokusekelwa kwamakhasimende okufika ngesikhathi kuyanikezwa. Imbozwa yimbuyiselo ekhawulelwe yezinsuku ezingama-90. Uma unemibuzo, sicela usithinte nge-oda lakho.
I-WOWOW Commercial Kitchen Faucet Pot Filler Pasta Arm Chrome
Isikhuhlu sembiza sembiza yesitofu sekhishini lakho 2311100C
Isikhiphi se-pot filler iyisikebhe esisebenzayo sokuphuma ekhishini lakho engalweni ende ende ehlanganisiwe. Imvamisa ifosholo efakwa ebhodweni ibekwa phezu kwesitofu ekhishini lakho. Ngale ndlela uyakwazi ukugcwalisa izimbiza ngamanzi, ngenkathi zibekwe esitofini. Njengalokhu akudingeki ukuthi uphathe izimbiza ezigcwele ezisindayo ezisuka ekhishini usinki wakho uye ekhishini lakho. Izimbiza zokudambisa izimbiza zendabuko akumele zididaniswe neminye imishini yokucwilisa ekhishini enengalo ehlanganisiwe. Umehluko omkhulu phakathi kwesikhumulo sebhodwe elinebhodwe nefosipi elihlanganisiwe lasekhishini ukulethwa kwamanzi afudumele. Ngesikhongo sombiza wokubhaka kuyatholakala kuphela amanzi abandayo elilodwa. Kodwa-ke, ungakwazi ukuhlanganisa kalula isikebhe sokubhaka sembiza ngephedi yokuhlangana ekhishini elihlanganisiwe ukuze ufinyelele ekuvumelaneni ekugcineni ekwakhiweni kwekhishini lakho.
Lapho udizayina ikhishi lakho, ekuqaleni uvame ukucabanga ukuthi ikhishi lakho lephupho kufanele libukeke kanjani. Kepha mhlawumbe okubaluleke kakhulu ukusebenza kwekhishi lakho lephupho elisha. Kufanele ucabange ukuthi upheka kanjani, hlobo luni lwemishini oyidingayo, lapho udinga khona imithombo elula, nokuthi ungaligcina kanjani kalula ikhishi lakho. Yonke into eyodwa ekhishini lakho inikeza izinqumo ezahlukahlukene. Lokhu kubalwa nakompompi bakho basekhishini. Kepha isici esivame ukukhohlwa, ukusebenza ekugcineni kwepayipi lokugcwalisa ibhodlela le-pasta. Mane nje ngoba akwaziwa kabanzi. Ngakolunye uhlangothi lolu hlobo lwompompi wasekhishini lungenza impilo yakho ibe lula kakhulu uma upheka.
Kungani udinga ipayipi lokugcwalisa ibhodlela lasekhishini?
I-pro enkulu yompompi wengalo ye-pasta ukuthi ingakusindisa uphethe ibhodwe elisindayo eligcwele amanzi kusuka kusinki wasekhishini uye esitofini sakho sasekhishini. Lokhu kungaba inzuzo enkulu kuwe uma ungakwazi noma ungafuni ukuphatha izinto ezisindayo. Ukuthwala izimbiza ezisindayo kungadala ubunzima ezandleni zakho, izingalo nasemhlane. Lokho kungaba kuphazamisa uma usuvele uhlangabezana nobuhlungu emhlane noma ezandleni zakho. Ngaphandle kwalokho, kungenzeka ukuthi izimbiza ezinkulu azingeni esinkini sakho sasekhishini. Ngalesi sizathu kungaba yinselele ukugcwalisa imbiza enkulu ngamanzi.
Ungakhetha kokukhethwa kukho okuyisisekelo okubili uma kukhulunywa ngompompi bokugcwalisa imbiza. Kukhona ompompi bokugcwalisa amabhodwe ababumbene futhi abahlanganiswe kabili. Kuya ngosayizi wesitofu sakho sasekhishini ukuthi yini ezokusebenzela kangcono kakhulu. Uma unesitofu sasekhishini esinama-burner amaningi, umbhobho wokugcwalisa ibhodwe onamalunga aphindwe kabili uzosebenzela okungcono kakhulu ngenxa yokutholakala kwawo. I-WOWOW Modern Farmhouse Pot Filler Faucet epholishiwe i-Chrome ikunikeza ingalo ehlangene kabili enokufinyelela okuphelele kwamasentimitha angama-20. Ngale mpompi ende yokugcwalisa imbiza ungafinyelela kunoma iyiphi ingxenye yesitofu sakho sasekhishini ngakho-ke unikeza induduzo enkulu.
Izici ezisebenzayo zokugcwalisa ipasta yengalo yekhishi yekhishi
Ipayipi lokugcwalisa ibhodwe le-WOWOW liyasebenziseka kakhulu ngengalo yalo ehlanganisiwe, njengoba ungakwazi ukusonga ingalo ubuyele ngokuphelele odongeni lwesitofu. Ngale ndlela ngeke ithathe isikhala ekhishini lakho futhi ngeke ibukeke ingelusizo. Ngenxa yokuhleleka kwayo okuguquguqukayo ungagcina isikhala sekhishi eliyigugu. Le ompompi yokugcwalisa imbiza esezingeni eliphakeme ingasuswa ukuze uhloniphe ukwakheka kwesitayela kwekhishi lakho lokuhlobisa. Ngeke uze uyibone le mpompi yokugcwalisa imbiza odongeni lwakho!
Abantu abaningi besaba ukuthi umbhobho wokugcwalisa ibhodwe uzovuza futhi udale ukulimala kwamanzi ekhishini lakho. Ngokungafani nompompi bamanzi asekhishini, amanzi aconsayo angabanjwa ngosinki basekhishini. Ngompompi wokugcwalisa imbiza amanzi angahle awe esitofini sakho sasekhishini noma esiphikisayo. Futhi ekugcineni ekhishini lakho phansi okungadala umonakalo omkhulu impela. Ngezizathu zokuphepha, ompompi bokugcwalisa izimbiza bavame ukufakwa izigaxa ezimbili. Ngale ndlela umpompi wokugcwalisa ibhodwe uvikelwe kabili ekuthontsizeni. Ingalo enwetshiwe yompompi wokugcwalisa imbiza kaWOWOW unama-valve amabili wokulawula ukuhamba kabili. Uma usuqedile ukupheka, uvele ucishe i-valve enkulu futhi, ngakho-ke awekho amanzi angachitheka. Ngale ndlela ukuphepha kwekhishi lakho kuqinisekisiwe.
Isikhiphi sekhwalithi ephezulu ye-pot filler
I-Chrome ye-Wowow Modern Farmhouse Pot Filler Faucet Polished Chrome yenziwe ngobuchwepheshe besimanje kakhulu. Ngale ndlela i-WOWOW iqinisekisa ubukhulu obunembile balesi isikejana sokugcwalisa imbiza ukusebenza kahle. Le faucet ye-WOWOW pot filler inikeza isiqinisekiso sokuphila isikhathi eside ngoba ikhwalithi ephezulu yangaphakathi eyenziwe kahle. Wenziwe nge-pure high-density zethusi (ithusi). Uqinisekiswa ngamanzi okuphuza ahlanzekile aphuma kule isikebhe ngaphandle kwezinto eziyingozi. Impilo yakho ingaphezu kwakho konke ebaluleke kakhulu! Akusizi ngalutho ukuthi lo mkhiqizo we-WOWOW uqinisekiswe yi-ISO.
Ukuhlinzekwa kwamanzi okuhle ngale mpompi yokugcwalisa ompompi wengalo
Nge-spout ephezulu ye-360-degree spout, ungafinyelela cishe kunoma iyiphi indawo futhi ugcwalisa noma yini kalula. Ama-valves enziwa ngekhwalithi enhle kakhulu futhi akhululekile kakhulu ukuphatha. Uqaphela ikhwalithi ngokushesha lapho usebenzisa ama-valve. Imodi yokusakaza ngakolunye uhlangothi ilungele ukugcwaliswa kwamanzi. Inika ingcindezi eqinile yokuhlinzeka ngokusakazwa kwamanzi okungaguquki. Amawolishi anomfutho ophakeme ugwema ukusaphaza nokushayela ukukunikeza induduzo enhle. Futhi yilokho kanye okudingayo kusuka ekhishini lakho faucets!
Isikhiphi se-pot filler se-WOWOW siqediwe ngesinono esiminyene. Inomphetho we-chrome wokuqothula oyi-classy ozolingana cishe nasekhishini ngalinye lokuqamba. Isikhiphi sefilidi se-potowler seWowOW singemukeli futhi kulula ukugeza. Ukuze ulondoloze isikebhe sakho sembiza yokuhlanza kulula futhi. Ungagcina isikebhe sakho sombiza sembiza njengento entsha isikhathi eside. I-WOWOW inikeza iwaranti yeminyaka engu-5 kuwo wonke amafayili ayo. Ngalesi sizathu uyazi ukuthi uthole isikebhe sokubhaka sembiza esikunikeza isilinganiso esihle kakhulu samanani. Ngesiqinisekiso sokubuya semali sezinsuku zethu ezingama-90, ungabuyisela isikebhe sakho sombiza ngaphandle kwenkinga uma ungafuni. Kepha Siyazi ukuthi lokhu ngeke kwenzeke. Sithemba umkhiqizo wethu!
Izinzuzo zesikhwanyana sebhodwe lokufafaza ngamafuphi:
Gcwalisa izimbiza zakho esitofini sakho
· Ingalo ehlanganyelwe esebenzayo ukubeka isikebhe sokufafaza sembiza kalula
· Amabili ahlomile ukuze ivumelane nezimo
· Ungangena kalula ezindaweni ezingenakufinyeleleka ngamasentimitha angama-20
· Idizayini eyingqayizivele eyenziwe nge-chrome ebunjiwe
I-SKU: 2311100C Categories: Ikhishi Faucets, Embizeni Filler Ikhishi ompompi Tags: ingalo ye-pasta, Ipholile, Ibhodlela lokugcwalisa, I-Wall Isekelwe
15.51 x 9.61 x amasentimitha angu-2.05
imbiza yokugcwalisa isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu chrome
I-Pot Filler Faucet Folding Double Handle Chrome
Ezohwebo / Indawo yokudlela / Indawo yokuhlala / Endlini
Isixhumi sebhokisi lokugcwalisa imbiza I-aeractor ye-Neoperl ABS; Izinsiza Zokufaka (i-German Fischer nylon anchor bolt)